RW Kheyre oo mucaarad iyo muxaafidba baaq u diray, Sawirro:- | Somsoon
Home WARAR RW Kheyre oo mucaarad iyo muxaafidba baaq u diray, Sawirro:-
RW Kheyre oo mucaarad iyo muxaafidba baaq u diray, Sawirro:-
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo xalay khudbad ka jeediyey munaasabad lagu xusayey maalinta calanka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay muhiimada ay leedahay midnimada ummadda Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa ugu baaqay qof kasta oo Soomaali ah in uu u istaago ilaalinta qaranimada, iyo madaxbanaanida dalka iyo dadka Soomaaliyeed, isagoo xusay in muxaafad iyo mucaarad looga baahan yahay sidii ay ugu istaagi la haayeen ilaalinta xuduudaha iyo sharafta dhulka Soomaaliyeed.
”Qof walba oo naga mid ah, mucaarad iyo muxaafid oo fursad u hela in uu qarankiisa metalana, waxaa uu taariikhda ku geli doonaa sida uu u ilaaliyo, qarinimada, madaxbannaanida, midnimadda iyo ilaalinta xuduudaha, badda, hawada iyo dhulka guud ahaan dalkaan Soomaaliyeed.” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Khayre.
Hadalka Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa ku soo aadaya iyadoo ay dowladda Kenya si joogto ah ugu xad gudbeyso hawada Soomaaliya, sidoo kalana jabisay amarro dhanka hawada Soomaaliya ah oo ay soo rogtay dowladda federaalka, waxaana wax ka yar todoba maalmood gudahood magaalada Kismaayo ee koonfurta Soomaaliya ka dagtay labo diyaaradood oo laga leeyahay dalka Kenya, kuwaas oo jabiyay sharciga hawada Soomaaliya.
Article horeAbaabulka dibad-baxyo ka dhan ah Axmed Madoobe oo ka socda Garbahaarey
Article socoda Kenyan police killed by roadside bomb in Garissa near Somalia border